राजनीतिबाट सन्यास लिने बादलको घोषणा ! – News543Online
May 23, 2021 adminLeaveaComment on राजनीतिबाट सन्यास लिने बादलको घोषणा !
८ जेठ, काठमाडौं । राम बहादुर थापा ‘बादल’ अब आफु राजनीतिबाट सन्यास लिने मुडमा पुगेको बताएका छन् ।
यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गर्न शनिवार एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । यहि बैठकमा बादल निराश देखिएको ति नेताले सुनाए ।
खोटाङमा अनलाइन कक्षा लिन रुखमा डेरा